Kulan sannadeedkii xubnaha xisbiga Socialdemokraatiga oo qodobo badan laysku afgartey. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulan sannadeedkii xubnaha xisbiga Socialdemokraatiga
Om Socialdemokraterna ska vinna tillbaks regerinsgmakten år 2010
Kulan sannadeedkii xubnaha xisbiga Socialdemokraatiga oo qodobo badan laysku afgartey.
Publicerat måndag 2 november 2009 kl 12.17
kulan sannadeedkii xubnaha xisbiga Socialdemokratiga oo soo gaban gaboobay maalintii axadda,kaas oo uga furmey xaafadda Älvsjö maalintii arbacadda, waxayna ka soo saareen go'aamo dhawr ah oo loogu hawl gali doono doorashada 2010-ka. Waxaana kamid ah qodobadda ay xoogga saari doonaan,xisbiga Socialka iyo kuwa gacan saarka la leh oo kala ah Xisbiga Cagaaran ee Miljöpartiet iyo Xisbbiga biddixda ee Vänsterpartiet. Siyaasadda suuqa shaqada(Shaqo la'aanta oo la dhimo), Shirkadaha yar yar oo siyaasaddooda la horumariyo, canshuurta ku dhacda waayeelka oo si cadaalad ah loo eego,dhalin yaradda oo loobaneeyo goobaha shaqada, cimilada oo la hagaajiyo iyo guud ahaan canshuuraha oo kor loo qaado.
kulan sannadeedkii xubnaha xisbiga Socialdemokratiga oo soo gaban gaboobay maalintii axadda,kaas oo uga furmey xaafadda Älvsjö maalintii arbacadda, waxayna ka soo saareen go'aamo dhawr ah oo loogu hawl gali doono doorashada 2010-ka. Waxaana kamid ah qodobadda ay xoogga saari doonaan,xisbiga Socialka iyo kuwa gacan saarka la leh oo kala ah Xisbiga Cagaaran ee Miljöpartiet iyo Xisbbiga biddixda ee Vänsterpartiet.
Siyaasadda suuqa shaqada(Shaqo la'aanta oo la dhimo), Shirkadaha yar yar oo siyaasaddooda la horumariyo, canshuurta ku dhacda waayeelka oo si cadaalad ah loo eego,dhalin yaradda oo loobaneeyo goobaha shaqada, cimilada oo la hagaajiyo iyo guud ahaan canshuuraha oo kor loo qaado. Go'aamadaan oo guud ahaan loo codeeyay iyo kuwo kaloo badan ayeey soo dhaweeysay hogaamiyaha xisbiga Socialdemokrat-ka Mona Sahlin oo aan heeysan kalsooni faro badan marka ay hay'addaha saadaalintu barbardhigeen Ra'iisal wasaaraha dalkaan Sweden Fredrik Reinfeldt, oo ah gudoomiyaha xisbbiga garbka midig ee Moderaterna, isla markaana ah kan la gali doona looltanka hogaanka dalka doorashada dhaceeysa sanadka 2010-ka.
Xisbiga Socialdemokratiga iyo xulufadiisu waxeey ku rajo weeyn yahiin in eey kala wareegaan taladda dalka xisbiyadda garabka midig, taas oo ay ku gaari karaan, waa sida ay saadaaaliyeen quburadda ku xeesha dheer siyaasada,in ay hantaan magaalooyinka waaweeyn oo ay ku qasaareen doorashadii 2006-dii, ineey soo celiyaan kalsoonida shacabka gaar ahaan tan xisbiga Socialdemokrat-ka.
Dhinaca kale xisbiga Socialdemokrat-ka ayaa la hadal hayaa in ay siyaasadiisu u jenjeerto dhanka garbka midig, taas oo sababtey raadinta cododka dadka aaminsan siyaasadda dhex.